अबोध बालकको प्रश्न – मेरो के दोष थियो ? | सिमान्तMarginal अबोध बालकको प्रश्न – मेरो के दोष थियो ? – सिमान्तMarginal
Posted on4Sep 20152Nov 2015 by Jesi | INCOMESCO
प्रजातन्त्रका ‘डन’हरुले अर्काको देशमा बिग्रह फैलाएर विश्व समुदायलाई दिएको सन्देश हो, यो तीन बर्षको अबोध बालक । ज्यान बचाउन हिँडेका शरणार्थिहरुको डुंगा छालले पल्टिएर यो अबोध बालकका ५ बर्षका दाजु र आमा पनि एक एक गरी समुद्रमा खसे र बालकको म्रित शरीरलाई समुन्द्रको छालले किनरामा फ्याँकिदियो । युद्धमा रमाइरहेका अघोशित ‘डन’हरुलाई यो पीडित बालकले ठुलो प्रश्न छाडेर गयो- मेरो के दोष थियो ???? आज विश्वनै स्तब्ध छ !
‘उनीहरु खेल्नको लागि मलाई ब्यूँझाउँथे । यो भन्दा राम्रो कुरा के हुन्थ्यो र ? सबै सकियो ।’
‘म मेरो परिवारको चिहानसँगै बसेर मेरो पीडा कम गर्न चाहन्छु’,- बालक एलानका बाबु अब्दुल्लाले भने । सबै म्रीतक शरणार्थिहरुको चिर शन्तिको कामना गर्दछु ।
समुद्रबाट उठाइदै गरेको एलनको तस्विर सिरिया शरणार्थीको दुर्दशाको बिम्ब बनेको छ । तस्विर देखेर आक्रोशित मानिसहरुले यूरोपेली सरकारको आलोचना गरेका छन् । यो बर्ष समुद्रमार्फत यूरोप छिर्न खोज्ने सयौं सिरियाली शरणार्थीको मृत्यु भइसकेको छ ।
फोटोमा देखिएका बालक तीन वर्षीय एलान भएको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । उनी पाँच वर्षीय दाजु जलिप, आमा रिहान र बुबा अब्दुल्लाह कुर्दीसँगै डुबेका थिए । तीन वर्षीय बालकका बुबा अब्दुल्लाह भने ज्यान बचाउन सफल भएका छन् ।
टर्कीको समाचार संस्था डोगनले समुद्रमा डुब्नेहरु सिरियाको कोबाने सहरका शरणार्थी भएको जनाएको छ । इस्लामिक स्टेटबाट बच्न उनीहरु गत वर्ष भागेर टर्की आएका थिए ।
Dead Syrian child
Previous Postअहितमा काम गरेका भंडुवा एन.जि.ओ. माथि अंकुसको तयारीNext Postअब के हुन्छ वाग्लुङ
2 thoughts on “अबोध बालकको प्रश्न – मेरो के दोष थियो ?”
4 Sep 2015 at 12:57 pm
4 Sep 2015 at 1:05 pm
That’s true, Crisis of Humanity !